कसरी थाहा पाउने यदि खेल मेरो पीसीमा चलिरहेको छ 🥇 Emulator.online ▷ 🥇
मलाई थाहा छ यदि मेरो पीसीमा खेल चलिरहेको छ भने कसरी? तपाईं सजिलैसँग विशेष उपकरणहरू जस्तै वेबसाइटको सहायताले पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ के म यो चलाउन सक्छु?। यदि तपाईं आफ्नो कम्प्युटर स्क्यान गर्न चाहनुहुन्न भने, तपाईं म्यानुअल रूपमा विशिष्टताहरू तुलना गर्ने परम्परागत विधिमा जान सक्नुहुन्छ।
तपाइँको पीसी कमजोर छ वा कसरी खेल चलाउन ठीक काम गर्दछ भनेर हेर्न तल हेर्नुहोस्।
एक विशेष वेबसाइट को मद्दत संग
त्यहाँ केहि वेबसाइटहरू छन् जुन बजारमा मुख्य खेलहरू द्वारा माग गरिएको न्यूनतम आवश्यकताहरूसँग तपाईंको कम्प्युटरको विनिर्देशहरूको तुलना गर्नमा माहिर छन्। OR के म यो चलाउन सक्छु? एक सबैभन्दा लोकप्रिय हो, स्वचालित रूपमा तपाईंको मेसिनको कन्फिगरेसन प्रमाणित गर्न सक्षम हुँदै।
1. तपाईको रोजाईको ब्राउजर खोल्नुहोस् र म चलाउन सक्दछु?
2. मुख्य पृष्ठमा, तपाइँले एउटा खोजी बाकस देख्नुहुनेछ जुन तपाइँले खेलको नाम टाइप गर्नुपर्नेछ, जस्तै, सिम्स If. यदि खेल पृष्ठ सूचीमा उपलब्ध छ भने, यो सूचीमा देखिनेछ। नाममा क्लिक गर्नुहोस् जुन खोजी त्रुटिबाट बच्न देखा पर्दछ;
3. त्यसपछि बटनमा क्लिक गर्नुहोस् तपाईं यसलाई चलाउन सक्नुहुन्छ अनुसन्धान गर्न;
4. अर्को पृष्ठमा, खेल चलाउन न्यूनतम र आदर्श आवश्यकताहरू देखाइनेछ। तपाईको पीसी विश्लेषणको लागि, यो एक फाइल डाउनलोड गर्नु आवश्यक छ जसले वेबसाइटलाई तपाइँको मेसिनको टेक्निकल विशिष्टता प्रमाणित गर्न अनुमति दिँदछ। यो गर्नका लागि बटनमा क्लिक गर्नुहोस् तपाईं यसलाई चलाउन सक्नुहुन्छ वेबसाइटबाट अनुप्रयोग डाउनलोड गर्न;
5. कार्यान्वयन योग्य फाईल खोल्नुहोस् र वेबसाइट पृष्ठ खुला राख्नुहोस्। प्रोग्रामले स्वचालित रूपमा तपाइँको मेशिनको विश्लेषण गर्न सुरू गर्दछ;
ब्राउजरमा निर्भर गर्दै, कार्यक्रम पूरा भए पछि स्क्रिनको तल प्रदर्शित हुनेछ। यो डाउनलोड सूचीमा पनि उपलब्ध हुनेछ ब्राउजर र निश्चित रूपमा गन्तव्य फोल्डरमा।
6. डायग्नोस्टिक समय केहि सेकेन्ड देखि मिनेटमा भिन्न हुन सक्दछ र परिणाम तपाईंले खुला राख्नु भएको वेबसाइट पृष्ठमा प्रदर्शित हुनेछ। यसले तपाईंलाई भन्छ यदि तपाईंको मेसिनसँग न्यूनतम आवश्यक आवश्यकताहरू छन् र सिफारिश गरिएको पनि छ ताकि खेल समस्या बिना काम गर्दछ।
अन्य साइटहरू पत्ता लगाउनको लागि यदि खेल पीसीमा चलेको छ
PCGameBenchmark ले तपाईंलाई म्यानुअल रूपमा आफ्नो पीसी सेटिंग्स प्रविष्ट गर्न वा सफ्टवेयर डाउनलोड गर्न मद्दत गर्दछ जसले मेशिन विशिष्टताहरूको स्वत: विश्लेषण गर्दछ। त्यसो भए खेलको नाम खोजी गर्नुहोस्।
EA शीर्षकहरूमा विशेषज्ञता पाए पनि, खेल बहससँग अन्य विकासकर्ताहरूबाट विकल्पहरू छन्। अघिल्लो उपकरण जस्तै, यसले तपाईंलाई मैन्युअल रूपमा डाटा प्रविष्ट गर्न वा अनुप्रयोग डाउनलोड गर्न अनुमति दिन्छ जुन पीसीको बारेमा सूचना स col्कलन गर्दछ। त्यसो भए, इच्छित खेलको लागि मात्र खोजी गर्नुहोस्।
अर्को तरिका भनेको तपाइँको पीसीमा खेलले काम गर्छ वा गर्दैन भनेर जान्नको लागि अर्को तरिका भनेको पीसीको टेक्निकल स्पेसिफिकेशन्सलाई म्यानुअल रूपमा खेललाई आवश्यक पर्ने न्यूनतम आवश्यकताहरूसँग तुलना गर्नु हो। वेबसाइटहरू मार्फत समाधान केहि बेर लिन सक्दछ, तर यो गर्नका लागि पनि सरल छ।
कसरी पीसी विवरणहरू पत्ता लगाउने
तपाईले आफ्नो कम्प्युटरको टेक्निकल स्पेसिफिकेसन धेरै तरीकाले पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। ती मध्ये सब भन्दा सरल शब्द लेखेर हो Msinfo32.exe विन्डोज खोजी बाकसमा। प्रणालीको संस्करणमा निर्भर गर्दै, खोजी उपकरण उपकरणपट्टीमा वा स्टार्ट मेनूमा (विन्डोज आइकनमा क्लिक गरेर) उपलब्ध हुन्छ।
खोजी परिणाममा क्लिक गर्नुहोस् Msinfo32.exe खोल्नु। यदि तपाईं सक्नुहुन्न भने, तपाईंलाई आवश्यक पर्न सक्छ प्रशासकको रूपमा चलाउनुहोस्। विकल्प हेर्नका लागि नतिजामा केवल क्लिक गर्नुहोस्।
विन्डोमा प्रणाली जानकारी, बायाँ पट्टीमा क्लिक गर्नुहोस् प्रणाली सारांश। तपाईं यसको बारेमा जानकारी हेर्न सक्नुहुन्छ अपरेटिंग प्रणाली (१), प्रोसेसर (२) mi मेमोरी ()).
भण्डारण जाँच गर्न क्लिक गर्नुहोस् भण्डारण र त्यसपछि भित्र एकाइहरु.
जे भए पनि, तपाइँको भिडियो कार्ड मोडेल फेला पार्न क्लिक गर्नुहोस् अवयव र त्यसपछि भित्र Exposición। यदि तपाइँको कम्प्युटर संग एक समर्पित कार्ड र एक निर्मित कार्ड छ, दुबै प्रकारको डेटा प्रदर्शित हुनेछ।
हाम्रो मार्गनिर्देशन पीसी सेटिंग्स हेर्नुहोस् विन्डोजको बिभिन्न संस्करणहरुमा विवरणमा चश्मा कसरी जाँच गर्ने भनेर वर्णन गर्दछ। सोध्नुहोस् कि यदि तपाइँ यस विषयमा अधिक जानकारी जान्न चाहानुहुन्छ।
यदि तपाइँ प्रक्रियालाई गति दिन चाहानुहुन्छ भने तपाइँ प्रोग्राम प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ विशिष्टताCCleaner द्वारा। नि: शुल्क संस्करण हार्डवेयर प्रमाणित गर्न र आवश्यक जानकारी प्रदान गर्न सक्छन् कि एक खेल आफ्नो मशीन संग उपयुक्त छ।
केवल डाउनलोड, स्थापना र बटन क्लिक गर्नुहोस् Speecy चलाउनुहोस्। केही सेकेन्ड भित्र, उपकरणको बारेमा डेटा प्रदर्शित हुन्छ, तल देखाईएको छ। थप रूपमा, सीपीयू र भिडियो कार्डको तापमान पनि रिपोर्ट गरिएको छ।
न्यूनतम खेल आवश्यकताहरूसँग तुलना
एक पटक तपाईंसँग आफ्नो कम्प्युटरको टेक्निकल विशिष्टताहरू छन्, केवल मेशिनमा खेलनको लागि आवश्यक न्यूनतम आवश्यकताहरू जाँच गर्नुहोस्। यो जानकारी सामान्यतया विकासकर्ताहरूको वेबसाइटहरू र प्लेटफर्महरूमा उपलब्ध हुन्छ जुन तिनीहरूलाई होस्ट गर्दछ।
स्टीममा, उदाहरणका लागि, जानकारी सेक्सन अन्तर्गत फेला पार्न सकिन्छ यस खेलको बारेमा। एन प्रणाली आवश्यकताहरू, पीसीमा खेल प्रयोग गर्नका लागि न्यूनतम र सिफारिस गरिएका आवश्यकताहरू हुन्।
फिफा २१ को मामला मा, निम्न परिणाम प्रदर्शित हुन्छ:
वैकल्पिक साइटहरू प्रयोग गर्नु हो जुन एक ठाउँमा मुख्य खेलहरूको न्यूनतम आवश्यकताहरू पूरा गर्दछ। केवल तपाईले चाहानु भएको खोजी गर्न नामबाट खोजी गर्नुहोस्।
के म यसलाई चलाउन सक्छु, PCGameBenchmark र खेल बहस यो डेटा प्रस्तुत गर्दछ। उनीहरू बाहेक, त्यहाँ खेल प्रणाली आवश्यकता पृष्ठ पनि छ।
न्यूनतम आवश्यकताहरू x सिफारिश गरिएको आवश्यकताहरू
न्यूनतम आवश्यकताहरूले खेल चलाउन सक्षम हार्डवेयरलाई संकेत गर्दछ। जहाँसम्म, यसले राम्रो प्रदर्शन गर्दछ, जस्तै चिकनी र उत्तम ग्राफिक्स, यदि पीसीसँग सिफारिस गरिएको विशेष विवरण छ।
अपरेटिंग प्रणाली र आवश्यक डिस्क स्पेस न्यूनतम र सिफारिस गरिएको आवश्यकता बीच भिन्न हुँदैन। र्याम, प्रोसेसर र ग्राफिक्स कार्ड ती कम्पोनेन्टहरू हुन् जुन एक देखि अर्कोमा धेरै फरक हुन सक्दछ।
सब भन्दा राम्रो र हल्का एन्ड्रोइड इमुलेटरहरू कमजोर पीसीहरूमा खेल्न
कमजोर पीसीको लागि स्क्रिन रेकर्डिंग विकल्पहरू
कसरी तपाईको फोनलाई different बिभिन्न तरीकाबाट गैर स्मार्ट TV मा जडान गर्ने